LAMIJA: ဘော်လကန်နံဝိညာဉ်နှင့်ဆွီဒင်အနည်းဆုံး၏ဖက်ရှင်ရောနှော - အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း
Up ကိုနှင့်လာမယ့်နုပျိုဒီဇိုင်နာ LAMIJA လေဆာဖြတ်တောက်မှုသားရေ, လေဆာဖြတ်တောက်မှုအဝတ်အတွက် eyelets, နှင့်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခု signum ဖြစ်သည့်အထူးပန်း၏သူမ၏ SS16 စုဆောင်းခြင်းနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအံ့သြသွားနိုင်ခဲ့သည်။ ထက်အခြားအဘယ်သူမျှမ Giovanna Battaglia ခွင့်ပြုချက်တဲ့တံဆိပ်ခေါင်းသောမျက်နှာစာတန်းပေါ်မှာထိုင်!
ငါသည်ငါ့အကြိုက်ဆုံးမှာ Lamija တွေ့ဆုံရန် စတော့ဟုမ်း, Taverna Brillo အတွက်အင်တာဗျူးအစက်အပြောက်, cappuccino တစ်ခွက်ကျော်။ သူမသည်အနက်ရောင်ဝတ်စုံနှင့်အနီရောင်နှုတ်ခမ်းနီကျီ - သူ့အဘို့လက်မှတ်နှင့်သူမ၏နက်ရှိုင်းသောအညိုရောင်မျက်လုံးများဖြင့်ငါ့ကိုကြည့်ပါတယ်။ ကျိန်းသေဘော်လကန်ကနေ Soul မိန်းကလေးငါထင်, ငါ Lamija ဘာလို့လဲဆိုတော့မမှားဖြစ်ကြောင်းကို ဘော့စနီးယားကနေကြွလာ နှင့်စစ်ပွဲအတွင်းသူမ၏မိသားစုနှင့်အတူဒုက္ခသည်တစ်ဦးအဖြစ်ဆွီဒင်သို့ရောက်ကြ၏။ နှစ်ဦးစလုံးသူမ၏မိဘများဒါကြောင့်သူတို့ဆွီဒင်နိုင်ငံတွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အကိုရှာဖွေခဲ့ကြဒီမှာတစ်ဘဝကိုတည်ဆောက်ဆရာဝန်များဖြစ်ကြသည်။ သို့သော် Lamija နှင့်သူမ၏မိသားစုစစ်ပွဲမေ့လျော့ကြပြီမဟုတ်ခြင်းနှင့်တိုက်ပွဲများနှင့်ဆုံးရှုံးမှု၏အဓိကအကြောင်းသူမ၏အဝတ်ဒီဇိုင်းပြန်လာပါသည်။
Ekaterina Larsson ဘို့ အောင်မြင်မှုပုံပြင်များ Mag :
ဟုတ်ပါတယ်, ငါအမျိုးသားရေးဆင်မြန်းကိုကြည့်ခြင်းနှင့်ပန်းကြိုက်နှစ်သက်ခြင်း, ပုတီး - ကအလွန်အသေးစိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတျ - ဤငါပြုသောအမှုကိုသောအခါငါသဘောကျတယ်အရာဖြစ်တယ်။ ငါမိုးသည်းထန်စွာအဆင်တန်ဆာကြိုက်တယ်နှင့်ဆွီဒင် minimalistic silhouette နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး။ ဒါကြောင့်ဒီကိုငါ့အထူးပြုဖြစ်ပါတယ်။
ဘူဂေးရီးယားလူထုပုံပြင်များဆင်မြန်းအတွက်ပန်း (အရှေဆင်တူသည်ယူဆ) အဓိကအားဖြင့်အနီရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်သင်၏အဝတ်၌သင်တို့ကိုအများအားဖြင့်အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ကိုအသုံးပြုပါ။ အဘယ်ကြောင့်?
မသာ, ငါရွှေငွေဟာ Thread ကိုသုံးပါ။ ထိုသူတို့ကအဖြစ်ကောင်းစွာအရောင်အပိုင်းတွေအများကြီးရှိသည်, ဒါပေမယ့်ငါ့အဘို့အဖြူရောင်နှင့်အနက်ရောင်ငါငါ့အဘို့ဘော့စနီးယားနှင့်ဆွီဒင်နိုင်ငံသောအတိတ်နှင့်အနာဂတ်အကြောင်းငါ့အဇာတ်လမ်းကိုပြောပြအဖြစ်ကိုပိုမိုပြုလုပ်ကြည့်ပါ။
တောင်မှငါအလုပ်လုပ်သည့်အခါအရောင်ကိုမြင်လျှင်မကြိုက်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကအမြဲတမ်းသူတို့အရောင်၌ရှိကြ၏လျှင်ပင်ငါအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်မှာသူတို့ကိုပြန်လည်အသက်သွင်းပါလိမ့်မယ်အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုပါ, ငါ့ပုံကြမ်းစာအုပ်တွေမှာရှာဖွေနေ။ ဒါဟာအတိတ်နှင့်သမိုင်းနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ငါမှာရှာဖွေနေကြိုက်တယ်နှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။
ငါ၏အသစ်ကိုစုဆောင်းခြင်းအတွက်ဆောင်ပုဒ်ကလေးကမွေးဖွားသည်။ ငါကြက်ဥသောအမျိုးသမီးအခြမ်းမှာရှာဖွေနေခဲ့သည်။ သငျသညျဏုကမှာကြည့်ရှုပါလျှင်ဒါကြောင့်စက်ဝိုင်း (မြေတပြင်လုံး) နှင့်အထဲတွင်နှစ်ဆစက်ဝိုင်းရှိပါတယ်။ ငါ eyelets အသုံးပြုသောအဘယ်ကြောင့်ဒါကြောင့် - ငါကြက်ဥပုံကိုမြင်သောအခါငါချက်ချင်းစဉ်းစားနေတဲ့ technique ကို။ ငါသည်လည်းအလွန်အော်ဂဲနစ်သောယောက်ျားကိုအခြမ်းနှင့်သုက်ပိုးစဉ်းစားမိပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်မတစ်ထည်အဖြစ်စုဆောင်းမှုအတွက်သုံးပါသောလေဆာရောင်ခြည်ဖြတ်ပုံစံ, ဆွဲငင်။ ထိုအခါတတိယပုံစံအရာကလေးတစ်ဦးနေသူများကဖန်တီးလမ်းသင်္ကေတသည်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်၌တည်ရှိ၏, ထိုပေါင်းစပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ် - ငါ eyelet (စက်ဝိုင်း) ကိုအသုံးပြုငါထဲကဇာကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့လိုင်း၏အော်ဂဲနစ်မျိုး။ ဒီတော့ဒီကလေးတစ်ဦးကိုဖန်ဆင်းနှင့်စုဆောင်းခြင်းန်းကျင်ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုသုံးအဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ်။
© အဲရစ် brom
ငါကဘော့စနီးယားလူတွေချုပ်နှင့်မိမိတို့အဝတ်ကိုဂရုစိုက်ဖို့ဘယ်လိုသိကြထဲမှာကတည်းကငါ့အနောက်ခံနှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ထင်ပါတယ်။ တစ်ခုခုပျက်စီးခဲ့လျှင်သူတို့လက်ဖြင့်ချုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘော့စနီးယားအတွက်ပြည်သူ့သူတို့သည်ဆင်းရဲသားဖြစ်ကြ၏ဒီတော့မိမိတို့အဝတ်ကိုဂရုစိုက်ခြင်းနှင့်ငါစိတ်ဓာတ်နှင့်အတူကြီးပြင်းလာတယ်။ ငါဖှဲ့နှင့်ဇာထိုးပန်းထိုးဖို့ဘယ်လိုသိတယ် 11 တုန်းကကျွန်မချုပ်ဖို့ဘယ်လိုသိတယ်နဲ့ငါ့ကိုငါ့အမိကူညီပေးခဲ့သည်။ သူမသည်လှုံ့ဆော်မှုနဲ့ကျွန်မပထမဦးဆုံးဌာန၌ဖက်ရှင်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။
ငါVäxjoအတွက်လေ့လာအထက်တန်းကျောင်းတစ်ချည်မျှင်အထူးပြုခူး။ ထိုအခါ 16 ၏အသက်အရွယ်မှာမိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်အတူတစ်အမှတ်တံဆိပ်စတင်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ဒါငါစောစောစီးစီးအပေါ်တစ်ဦးဒီဇိုင်နာဖြစ်မယ့်ရည်မှန်းချက်ခဲ့ collection များကိုအောင်နှင့်ကျောင်းမှာအလွန်နှောင်းပိုင်းတွင်တည်းခိုအတူစတင်ခဲ့ပါတယ်။
ကျနော်တို့ကောင်းသောခဲ့ကြသည်ပေမယ့်ကျနော်တို့ကအရမ်းနုပျိုခဲ့ခံစားရတယ်။ ဒါနဲ့ဖြတ်တောက်ခြင်းအကယ်ဒမီထံသို့ ဝင်. , ငါ့ပုံစံထိုနောက်ငါ Beckmans ဒီဇိုင်နာကျောင်းကိုသွား၏သင်တန်းများနှင့်ပန်းအောင်။ နေဆဲငါ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ရှိသည်ဖို့လို - ထိုအခါငါဒါကြောင့်ငါကြင်နာ၏နောက်ကျောငါ 2013 ခံခဲ့ရသောအခါငါရှိရာမှဖြစ်ကြောင်းကို 17 အတွက်ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။
ယခုမှာသာ2နှစ်ကြာပြီးနောက်သင်စတော့ဟုမ်းဖက်ရှင်ရက်သတ္တပတ်မှာသင့်ကိုယ်ပိုင်ဖက်ရှင်ရှိုးရှိသည်?
ငါဘွဲ့ရပြီးနောက်တကယ်တော့ငါခဏဘော့စနီးယား သွား. Prada ပန်းလုပ်နေတာများအတွက်အလုပ်လုပ်သောသူအမျိုးသမီးတစ်ဦးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်။ ဒါနဲ့သူ့ထံသို့ သွား. သူမဘယ်လိုအချို့နည်းစနစ်အသစ်တွေ လုပ်. ချယ်လှယ်ဖို့ကျွန်မကိုသင်ပေးခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်ကျောင်းများ၏ကြင်နာခဲ့သည်။ ငါပိုကြီးတဲ့ volume ထဲမှာထုတ်လုပ်စတင်ရန်နှင့်လူသည်ငါ့အဝတ်ကိုဝတ်ဆင်ကြည့်ဖို့လိုခဲ့ကတည်းကအဖြစ်ကောင်းစွာထုတ်လုပ်သူများရှာနေငါ့အချိန်ဖြုန်းနေကြတယ်။
ငါလုပ်ခဲ့တဲ့ဆောင်းဦးရာသီသည်ဆောင်းရာသီစုဆောင်းမှုတွင်, ငါအဝတ်အစားတွေပေါ်ပန်းလုပ်ဖို့သုံးပတ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါကအလုပ်လုပ်မိဘတွေရဲ့အိမ်မှာကြမ်းပြင်ပေါ်မှာထိုင်နေစဉ်နဲ့ကျွန်မသူတို့နိုးသတိရ, အလုပ်လုပ် သွား. ပြန် လာ. , အိပ်ရာ သွား. ငါ့ကိုဆဲအတူတူပင်ပွဲချင်းပြီးထိုင်နေသည်ကိုတွေ့ပါမှတက်နိုး - ဒါဟာတကယ်ပြင်းထန်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါအချိန်ကငါ့ကျောနှင့်အတူပွဿနာမြားစှာရှိခဲ့! သို့သော်လည်းငါသည်ငါ၏အ collection များကိုထုတ်လုပ်ရန်ယခုစက်ရုံတစ်ရုံမှပြောနေတာနေပါတယ်။ ကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုထုတ်လုပ်ပေမယ့်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ဘော်လကန်ဒေသမှာရှိတဲ့ဖြစ်ကြသည်ကွဲပြားခြားနားသောစက်ရုံများ။ ဘော့စနီးယားအချို့။
အဆိုပါပန်းထိုးအဘို့ငါအိမ်မှာအလုပ်လုပ်သောမိန်းမတို့ကိုရှာပြီးသူတို့ကိုအချို့သောငွေရှာကူညီချင်တယ်။ သူတို့ကိုငါသင်ပေးနှင့်သူတို့တစ်တွေနမူနာစေနိုင်သည်ဆိုပါကကျွန်မကြည့်ပါ။ သူတို့တစ်တွေအမှားလုပ်တယ်ဆိုရင်သူတို့တစ်တွေအရည်အသွေးကိုတဦးတည်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်သည်အထိသူတို့အားလုံးအပေါ်ကိုထပ်ကိုစတင်ပါ။ ငါကထွက်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုသေချာမဖြစ်ကြောင်းကိုဒါသို့သော်ယခုအထိသူတို့သာအပိုငျးပိုငျးမဟုတ်အထည်တစ်ခုလုံးပစ္စည်းများစေပြီ။ ငါမစတင်သောအခါငါသည်လည်းငါစကားကိုနားထောငျက play တစ်ဦးအဆင်သင့်ပုံစံရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, ဒါကြောင့်သူတို့နီးပါးကတစ်ဦးခံစားချက်ရှိသည်ဖို့ရှိသည်။ ကပန်းမှကြွလာသောအခါဒါနဲ့အချို့စိန်ခေါ်မှုများရှိသည်။
ငါတကယ်ကြိုက်တယ် ဟူစိန် Chalayaငါ့အဘို့သူကယ့်ကိုအနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည် - သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးစုဆောင်းမှုထဲတွင်သူသည်သင်တို့ပေါ်တွင်သင်ရှိသည်အဝတ်သင်တစ်ဦးစစ်ထံမှပြေးဖို့ရှိသည်အခါသင်ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်ကြ၏ဘယ်လောက်လှပတဲ့ပုံပြင်ကိုပြောသည်။ ဒါကကျနော်ကိုယ်တိုင်မြင်ကြပြီအရှိဆုံးဖှယျ collection များကိုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်းငါသည်လည်း Balenciaga နှင့် Prada နဲ့တူ - ကို silhouette, စတိုင်ကအရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
သင်သည်အဘယ်မှာရာစတိုးဆိုင်များ, သင့် collection များကိုရောင်းချလျက်ရှိကြည့်ဖို့လိုပါသနည်း
Colette, လို, Barneys လိုရဲ့, Lafayette ။ ငါသော်လည်းအဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်လက်ျာ volumes ကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်အခါ။
ခရီးသွားလာအကြိုက်ဆုံး destination သို့?
ငါဆိုသည်ကားမယ်လို့ ဆာရာယဗေို - ကငါ့ကိုသွားနှင့်အပန်းဖြေဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ငါ၏အဆွေတွေ့ဆုံရန်။ ဒါဟာရုံရှိဖို့ကျွန်မကိုစိတ်အား,-down ကို run ဖြစ်ကြောင်းထပ်မံကွာဆာရာယဗေိုကနေအဟောင်းအိမ်များကိုကြည့်ပါ။ ဒါ့အပြင်စစ်ပွဲကာလအတွင်းဗုံးကြဲခဲ့ကြသောသူတို့, သူတို့တစ်တွေကြေကွဲဖွယ်လမ်း၌ငါ့ကိုလာအောင်နှိုးဆွ။ ငါစစ်ပွဲငါ့အသက်ကိုတစ်ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်, ငါကအများအပြားဆွေမျိုးသားချင်းများဆုံးရှုံးခဲ့ရဆိုလို။ ဒါနဲ့နောက်ကျောကပေမယ့်တစ်ဦးအကောင်းမြင်လမ်းအတွက်, ငါ့အဝတ်အစားတွေထဲမှာပြန်လည်အသက်သွင်းနိုင်ရန်အတွက်သွားကြဖို့ကြိုက်တယ်။ ငါ၏အမှုအချို့အတွက်လိုပဲသင်တို့ကိုငါစစ်ပွဲကနေအဝတ်သတင်းစာဆောင်းပါးတွေ၏နောက်ကျောဘက်မှာတွေ့နိုင်ပါသည်ပန်းထိုးပါပြီ။ ဒါကြောင့်တဦးတည်းဘက်မှာသင်ဤလှပသောပန်းကိုမြင်ရလိမ့်မယ်သင်ဂျာကင်အင်္ကျီကိုဖွင့်တဲ့အခါသင်နီးပါးနံရံကဲ့သို့စစ်သတင်းစာဆောင်းပါးတွေကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါတော်တော်လေးကိုမအတွက်တော်တော်လေးကြည့်ဖို့ - ဤငါစစ်ပွဲကိုကြည့်လိုပုံဖြစ်ပါသည်။
ရုံဖွင့်လှစ်သောအမျိုးသားစာကြည့်တိုက် - နီးပါး Arabic - ကလှပသောဗိသုကာနှင့်အဆင်တန်ဆာ, အရောင်အဆင်းနဲ့ mosaic အများကြီးရှိပါတယ်။ သူတို့ကစစ်ကာလအတွင်းကဗုံးကြဲခဲ့လို့ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံကာအလွန်အချိန်ကြာမြင့်စွာဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ ဒါကြောင့်သူတို့က (ထိုစစ်ပွဲအတွင်းပျောက်ဆုံးသွား) ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်လူတွေရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြသောအခါထံမှစစ်မှန်သောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုစာရွက်စာတမ်းများဖြစ်ပါသည် - လည်း Srebrenica အကြောင်းကိုတစ်ဦးတပ်ဆင်ခနှင့်အတူဖွင့်လှစ်မယ့်ပြခန်းရှိသေး၏။ စားသောက်ဆိုင် Kibe ရိုးရာဘော့စျနီးယားဟင်းလျာများရှိပါတယ်။ ဒါဟာအဖြစ်ကောင်းစွာမြို့အပေါ်မှာအလွန်ကောင်းတဲ့အမြင်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုတောင်ပေါ်တက်သည်။ လူတွေဥပမာဆွီဒင်ထက်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောလမ်းအတွက်အဲဒီမှာဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်သွားလာခြင်းကြောင့်ပဲဆာရာယဗေိုအတွက်လမ်းများတဝိုက်လမ်းလျှောက်အလွန်ဖှယျဖြစ်ပါတယ်။
Youtube ကိုအပေါ် LAMIJA
ကမ္ဘာမြေအပြင်ဘက်ကိုလိုနီ ပတ်သက်. နာဆာယှဉ်ပြိုင်မှု၏ဆုရှင်တွေ့ဆုံရန်
Nasimo - ရေးခွအနုပညာလောကရှိ
အတတ်ပညာ, ဘော်လကန်, ပုံ, lamija, ဆြီဒင္ႏုိင္ငံ | | rating:5/ 30